4 ka mid ah 5ta Horyaal ee Yurub oo la go'aamiyay kooxda qaadeysa
Friday, October 19th, 2018 - 13:53:26
Monday December 25, 2017 - 13:30:08 in Wararka by kubadbile news
Iyada oo lagu jiro xilliga kala barka ah ee Ciyaaraha Kubadda Cagta Yurub,waxaa muuqda in Horyaallada qaar la go’aamiyay kooxaha ku guuleysan kara kaddib markii kooxaha hoggaanka haya ay si cajiib ah u shaqeysteen Xagaagan.
Horyaallada Spain,England,Germany iyo France ayaa hadda u muuqda kuwo go’aan laga gaaray kooxaha qaadaya,waxaana ay kala yihiin.
Tababaraha Kooxda Barcelona, Ernesto Valverde ayaa guushii uu ka gaaray kulankii El Clasico ,waxaa ay kooxdiisa siisay in 45 dhibcood ka urursadaan 17 kulan oo Horyaalka Laliga ah,waxaana ay 9 dhibcood ka horreeyaan kooxda kaalinta 2aad ee Atletico Madrid oo isbuucan jabtay.
PSG,19 kulan oo ay ciyaartay waxaa ay heysataa 50 dhibcood,waxaana ay 9 dhibcood ka horreysaa Kooxaha Monocco iyo Lyon oo min 41 dhibcood wadaaga.
Bayern, waxaa ay leedahay 41 dhibcood waxaana ay 11 ka horreysaa kooxda kaalinta 2aad ee Schalke,iyada oo u muuqata in horyaalkaas gacanta Munich u dhamaanayo.
Premier League, haddiiba la leeyahay koox ayaa horyaalka lugta 1aad kula jirta waa Manchester City,waxaana ay 13 dhibcood ka horreysaa kooxda kaalinta 2aad ee Man United oo Todobaadkan jabtay.
Man City 18 kulan oo ay ciyaartay kaliya hal kulan ayey Bar barro gashay,inta kalena waa ay wada badisay,waxaana ay hadda leedahay 55 dhibcood.
Horyaalka Serie A-da Italy ayaa ah midka kaliya ee aan la garaneyn kooxda qaadeysa xilli ciyaareedkan,waxaana Kooxda Napoli oo hoggaamineysa ay kaliya dhibic ka sarreysaa Kooxda lixdii Sano ee la soo dhaafay qaadeysay ee Juventus.